Iwao Takamoto, ilay mpanentana izay foroka tany amin'ny toby fitanana | Famoronana an-tserasera
Iwao Takamoto dia mpanao sariitatra sy mpanao sary izay nanomboka niomana amin'ny maha-profesora ho avy azy rehefa nihaona tamin'ny fianakaviany tao amin'ny toby fitanana tany Manzanar izy, nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Ny sasany amin'ny sanganasany dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny sarimihetsika Cinderella, Sleeping Beauty ary Disney's Dalmatians 101; azonao atao fantaro tsara kokoa ny kalitaon'ny ao ambadik'i Takamoto ary ny fomba nanamboarana azy tao anaty tontolo tsy nety mihitsy.
Teraka tamin'ny 1925 izy ary taranaky ny mpifindra monina Japoney mipetraka Tany Etazonia dia nanamboatra ny tenany ho mpanao sariitatra izy nandritra ireo taona nandalovany tao amin'ny toby fitanana tany Manzanar. Tao izy dia nianatra nanoratra sy teknika momba ny sarimiaina miaraka amin'ireo mpanao sariitatra maro hafa izay niasa taty Etazonia taty aoriana noho ny sary mihetsika samihafa.
Taorian'ny ady, Nanomboka niasa tao amin'ny Disney Studios i Takamoto izay natombony ho mpanampy enti-mihetsika "tsy voamarina". ho an'i Milt Kahl, mpikambana amin'ireo fantatra amin'ny hoe Old Old Men na Nine Elders ary anisan'ny tantaran'i Disney tamin'ny naha mpisava lalana ny famokarana an'ilay orinasa; Raha ny marina, Walt Disney, noho izy ireo, dia afaka nanitatra ny faravodilanitra tamin'ny alàlan'ny fanolorana famokarana ho azy ireo tamin'ny taona 50; aza very ny fomba fanaovana sary totozy mickey.
Niara-niasa tamin'ny sarimihetsika Cinderella, Sleeping Beauty ary Dalmatians 101 izy. Izy izay dia tamin'ny 1961 rehefa nandao ny studio izy ary lasa mpikambana ao amin'ny lisitry ny Hannah-Barberah, ary eo no ahalalana ny sangan'asany sy ny volavolany toetrany amin'ny andiany Scooby Doo malaza.
Un mpanao sariitatra sy animator mahafinaritra izay nandalo ireo studio malaza indrindra, nisandoka tamin'ny fotoan-tsarotra toy ny tao amin'io toby fitanana io ary namolavola ny endri-tsoratra mahafinaritra indrindra tamin'io andian-dahatsary fahitalavitra mahafinaritra io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Iwao Takamoto, rehefa mianatra misintona amin'ny toby fitanana ianao mandritra ny Ady lehibe II